Fibedesana nitera-doza :: Reny nidaroka nahafaty ny zanany vavikely • AoRaha
Maty tsy tra-drano ny zazavavikely iray, folo taona, mipetraka any Vinanivao, distrikan’Antalaha. Voalaza fa novonoin’ny reniny tamin’ny kapoka sy daroka ary vely hazo io zaza io.
Nosamborina ilay renimpianakaviana. Niaiky ny zavadratsy vitany izy, araka ny nambaran’ny mpanao famotorana. Tazonina atao andrimaso any amin’ny zandary izy eo am-piandrasana ny fotoana hitondrana eny amin’ ny Fitsarana.
Tsy nisy nahita ny mety ho tabataba teo amin’izy mianaka ireto sy ny fomba nikapohan’ny reniny an’ilay zazavavy. Ity farany efa nitrosona teo ivelan’ny trano no nisy nahita.
“Hitan’ny mpiara-monina teo an-tokotany, tsy lavitra ny trano fonenany ilay ankizivavy efa tsy nisy aina intsony. Ny mpiara-monina no nampandre ny zandary”, hoy ny mpitandro ny filaminana nandray ny famotorana.
Teo no ho eo ihany dia notadiavina sy nanontaniana ny renin’ity zaza namoy ny ainy. Voalaza fa niaiky ho nikasi-tanana an’io zanany io ilay vehivavy. Tombanan’ ny mpanao famotorana fa tao an-tranony no nikapohana sy nidarohana azy. Nandositra izy kanjo io namoy ny ainy io teo an-tokotany io.
“Feno ratra ny vatan’ilay zaza. Nahitana faritra voakapoka tamin’ny hazo ihany koa ny hatony. Ireo rehetra ireo no ahiana ho nitarika ny fahafatesany. Tamin’ny famotorana savaranonando natao tamin’ny reniny no nilazany fa noho ny olana eo aminy no antony namonoany ny zanany. Tsy manambady izy ka nihevitra ny tsy hahavelona ny zanany roa. Novonoiny, vokatr’ izany, ilay vavimatoa. Amin’ ny fanadihadiana rehetra no hahafantarana ny tohiny sy ny mety ho antony hafa”, hoy ihany ny mpanao famotorana.
Lozam-pifamoivoizana :: Mpitondra môtô maty tsy tra-drano teny Ivato